पाँच बर्ष आधार तयार पार्यौ, अब जनतालाई आर्थिक सबलिकरणमा जोड्छौ : चौधरी - Rajmarg Online
पाँच बर्ष आधार तयार पार्यौ, अब जनतालाई आर्थिक सबलिकरणमा जोड्छौ : चौधरी
दाङ, २३ वैशाख । नेकपा एमालेका तर्फबाट घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नरुलाल चौधरी र उपप्रमुखमा हुमाकुमारी डिसी उम्मेदवार रहनुभएको छ । निर्वाचित भैसकेपछि गरिने कामको योजना सहित उहाँहरुल अहिले चुनावी अभियानमा व्यस्त हुनुहुन्छ । एक कार्यकाल नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका चौधरी फेरी उम्मेदवार बन्नुभएको छ । उहाँ सँग चुनावी अभियान, जित्ने आधार, जितेर गर्ने कामको योजनाहरुका बारेमा नगर प्रमुखका उम्मेदवार नरुलाल चौधरी सँग गरिएको कुराकानी ।
चुनावी अभियान कसरी चलाइरहनु भएको छ ?
निर्वाचनको मिति नजिक आउदै गर्दा विबिध ढंगले चुनावी अभियानलाई अघि बढाईरहेको छु । व्यक्तिगत भेटघाट, टोलमा भेटघाट एवं चुनावीसभाहरु मार्फत मतदाताहरुलाई भेट्ने र मत माग्ने काम भैरहेको छ । मतदाताहरुको सुझाबलाई ग्रहण गर्दै र आफ्नो भावी योजनाहरु सुनाउने काम भैरहेको छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न पार्टीहरुबाट नेकपा एमालेमा समाहित हुन आउनेहरुको पनि संख्या धेरै नै छ उहाँहरु सँग छलफल गर्ने र पार्टीमा स्वागत गर्ने काममा पनि व्यस्त छु । समग्रमा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ र अब नगरलाई कसरी संबृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच र मतदाताहरुको सुझाब ग्रहण गर्ने कामबाट चुनावी अभियान चलाईरहेको छु ।
के एजेन्डा लिएर चुनावी अभियानमा हुनुहुन्छ ?
यस अघि मैले ५ बर्षे कार्यकाल घोराही उपमहानगरको नेतृत्व सम्हालेर विदा भएको छु । जसरी नगरबासीहरुले अमूल्य मत दिएर नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुराउनुभयो उहाँहरुकै सल्लाह सुझाब र मागका आधारमा योजनाहरु बनाएर काम गरे । भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतीक क्षेत्रको रुपान्तरणमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएका छौ ।
फेरी एक कार्यकालका लागि मेरो पनि इच्छा र पार्टीले पनि दिएको जिम्मेवारीलाई अब जनताको संबृद्धी र आर्थिक परिबर्तनमा केन्द्रीत गरेर काम गर्ने सोच बनाएको छु । विषेश गरी नागरिकहरुको जिवनस्तर उठाउने नै महत्वपूर्ण कुरा हो । सडक, भवन, सिंचाई, यातायात, सञ्चार, कुलानाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापन आमूल परिबर्तन गरेका छौ । यसलाई थप गुणस्तरीय बनाउदै नागरिकहरुको आयआर्जन सँग जोडिने खालका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
अब स्वरोजगार बन्ने, कृषि, पशुपालनलाई आधुनिकिकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यवसायीक बनाउन तर्फ मेरो ध्यान जान्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको सिकाई क्रियाकलापलाई थप गुणस्तरीय बनाउने, विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्तरबृद्धी गरी सर्भसुलभ तरिकाले गुणस्तरीय र बिषेशज्ञ स्वास्थ्य सेवामा रुपान्तरण गर्ने योजना छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अब नागरिकहरुको आयस्तर बढाउने र सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने नै हो ।
जित्ने आधार के हुन ?
जित्ने आधारहरु प्रशस्त छन । एक कार्यकाल नगरको नेतृत्व गर्ने जुन जिम्मेवारी पाए त्यो जिम्मेवारी मैले कुशलतापूर्वक निर्बाह गरेको छु । यो नगरबासीले पनि अनुभूती गर्नुभएको छ । कहिकतै विबादमा नआई नगरबासीको हितमा काम गरेको छु । शहर बजार देखि गाउँ जोड्ने सबै बस्तीमा सडक पुराएको छु । कालोपत्रे सडकहरु शहर देखि गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । किसानहरुलाई खेतीमा सहयोग पुराउन ३ दर्जन बढी कृत्रिम जलाशय निर्माण गरेका छौ ।
सबै वडाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा छ । सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी मिलान पछि विद्यार्थीको भरिभराउ र शिक्षण सिकाईमा परिबर्तन आएको छ । मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउनेहरुको उपचार र व्यवस्थान भएको छ । नगरलाई हरभार बनाउने अभियान चलिरहेको छ भने छाडा पशुचौपायको उचित व्यवस्थापन भएको छ । बालमैत्री नगर घोषणा गरेका छौ ।
जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम मार्फत घरमै उपचार, मोतिया विन्दुको निशुल्क अप्रेशन, सुत्केरीलाई निशुल्क रगत, सिकलसेलका विरामीको निशुल्क उपचार, आमा र बच्चाको पोषणलाई खुत्रुके कार्यक्रम, खेलकुद तर्फ रंगशालाहरुको निर्माण जारी छ भने १९ वटै वडामा खेलकुद मैदान बनेका छन् ।
फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरेका छौ र नगल्ने फोहोर समेत विक्रि गर्दै छौ । ८३ वटा कानुनहरु आफै बनाएर नागरिकहरुको सेवामा केन्द्रित भयौँ । यसरी हामीले नमूना कामहरु धेरै गरेका छौ । र जनताले पनि बिश्वास गर्नुभएको छ । एक कार्यकाल फेरी मलाई नै भोट दिएर जिताउनु हुनेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।
घोराहीमा के कस्ता समस्या छ ?
यहाँ खासै समस्या केही छैनन् । अलिकलि समस्या के हो भने केन्द्र सरकारको मातहतमा पर्ने मुख्य सडकहरु लथालिंग हुदा हामीले आलोचला खेप्नु परेको छ । भूगोल हाम्रोमा पर्ने तर क्षेत्राधिकार हाम्रोमा नपर्दा काम गर्न अप्ठेरो भयो । सडक कार्यालय र फोरलेनले विभिन्न बहानामा आलटाल गर्ने र निर्माण व्यवसायीले समेत लापर्वाही गर्दा घोराही लमही, घोराही तुलसीपुर सडक घोराही मुर्कुटी, घोराही होलेरी सडकमा नागरिकले सास्ती पाउनुभएको छ ।
हामीले पटक पटक खबरदारी गरेका छौ । तर उनिहरुले काम गर्दैनन् र हाम्रो बदनाम गर्न खोज्दैछन् । हामी ग्राभेल गरेर केही सहज त बनाएका छौ तर मुख्य जिम्मेवारी भएका निकाय गैरजिम्मेवार बन्दा यो समस्या आएको हो ।
यस्तै प्रदेशको बजेट र नगरको बजेटबाट घोराहीका धारापानी, जिल्ला प्रशसान, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रोडमा पिच पूर्वको काम प्रदेशले गर्ने र कालोपत्रे नगरले गर्ने थियो । तर उनिहरुले काममा ढिलाई गर्दा पनि हामीलाई कालोपत्रे गर्न केही समस्या भएको छ । अन्य समस्या कुनै केही छैन ।
कस्तो उपमहानगर बनाउनु चाहनु हुन्छ ?
संबृद्ध र स्मार्ट उपमहानगर बनाउने सोच छ । पूर्वाधारमा सबल, अर्थतन्त्रमा सक्षम र सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल नगर बनाउने हाम्रो योजना छ । नागरिकहरुको जिवन स्तरलाई उच्च बनाउन उद्यम र व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्ने । कृषि तथा पशु पालन लगाएतका व्यवसायका माध्यमबाट नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने, सबै बालबालिकालाई शिक्षित बनाउदै लैजाने, युवाहरुलाई सिप युक्त बनाउने योजना छ । घोराही उपमहानगरपालिका भन्दा सबै क्षेत्रले परिचय दिन सकिने खालको नगर बनाउने हाम्रो उदेश्य हो ।
Prevप्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्ड दाङ आउदै
Nextतुलसीपुरमा उम्मेदवारहरुसँग चुनावी बहस